AFENO NY RAKITRA VOARARA AMIN'NY TENY ROSIANA - PROGRAMME REVIEW - 2019
Tena Programme Review
Fango voarara 1.0.26
Ny rakitra voarara dia fandaharanasa kely ho an'ny fampiroboroboana haingana ny tahiry tsirairay sy ny antontan-kevitra manontolo amin'ny fampiasana IDEA, algorithm iray amin'ny alàlan'ny fanodinana iraisam-pirenena mifototra amin'ny fanatanterahana asa matematika amin'ny teny miaraka amin'ny halavan'ny 16 bit.
Ny fitsipiky ny fampiharana dia tsotra: ny mandefa, tsy maintsy misafidy rakitra na ordinatera ianao ary manamboatra tenimiafina iray, ary mamafa izany, midira raha manokatra ny rakitra. Ho azo itokisana kokoa, ny loharano dia azo esorina amin'ny fanamarinana ny takila fisokonana mety.
Raha tsindry indroa eo amin'ny rakitra noforonin'ilay programa, dia asaina miditra amin'ny tenimiafina ianao, aorian'izay dia apetraka ny fampiharana izay ampifandraisina ny fanitarana ny rakitra.
Alefaso ny rakitra
Ny iray amin'ireo andraikitry ny fandaharana dia ny famafana tanteraka ny antontan-drakitra sy ny torohay raha tsy misy ny fanarenana, izany hoe misy ny fikorontanan'ny vatana sy ny habaka malalaka.
Ny rakitra voarara dia ahafahanao manoratra ny fanitarana ny rakitra voarakitra (voasokajy) mba hahafahanao mampihira ireo rakitra miafina amin'ny doka roa, tsy mila mifidy ny fampiharana isaky ny mandeha. Ny antontan-drakitra famoahana ny programa dia tokony hapetraka ao anaty ordinatera misaraka amin'ny sarimihetsika henjana ary mijanona ao.
Ny rindrambaiko ihany koa dia mamela anao hanampy amin'ny sehatry ny fifandraisana "Explorer" teboka "Rakitra encrypt / decrypt" mba hanatanteraka ny famaritana tsy misy idiran'ny varavarankely.
Tena mora ny mampiasa programa;
Tsy misy fombafomba sy asa tsy ilaina - ny fanoratana dia miseho amin'ny tsindry roa;
Famafana tanteraka ny rakitra;
Ny fandaharana dia maimaimpoana.
Ny fanitarana ny sora-tanana dia alefa amin'ny rakitra miafina, izay mampiseho fa ampiasaina ny fitaovana fitahirizana.
Ny rakitra voarara - programa iray izay, amin'ny vitsy kely, dia manatanteraka tsara ny asany. Ny fanampiana ilaina - ny famafana ireo rakitra tsy misy ny famerenana amin'ny laoniny dia mahatonga azy ho fitaovana mahomby hampitomboana ny fiarovana an-tserasera.
RCF EnCoder / DeCoder Crypt4Free Ahoana no hanokafana rakitra xls amin'ny aterineto Fandaharam-potoana hamandrika rakitra sy rakitra
Ny rakitra voarara dia programa kely mba handaminana ny rakitra sy ny rakitra. Manana ny fanesorana tanteraka ny angon-drakitra avy amin'ny solosaina mafy orina.
Mpamorona: Samusenko Artem
https://termotools.com mg.termotools.com © Programme Review 2019